‘अकाउन्टेन्ट’ नै राखेर अपार्टमेन्टमा यौ'नधन्दा ! अपार्टमेन्टमा पुग्दा प्रहरी नै चकित - Himali Patrika
‘अकाउन्टेन्ट’ नै राखेर अपार्टमेन्टमा यौ’नधन्दा ! अपार्टमेन्टमा पुग्दा प्रहरी नै चकित
हिमाली पत्रिका १९ भाद्र २०७८, 9:01 pm
काठमाडौं । प्रहरी नै ग्राहक बनेर ललितपुर महानगरपालिकाको कासाबेल अपार्टमेन्टको ५ औं तल्लामापुगेपछि बाहिरिएको घ’टना हो यो । अपार्टमेन्टमा पुग्दा प्रहरी नै चकित पर्ने कस्तो छ त यो घट्ना ?
प्रहरीका अनुसार उनीहरुले अपार्टमेन्टमा यौ’नधन्दा मात्र चलाएका थिएनन्, कमाएको पैसा मिटरब्याजमा लगाउने गरेका रहेछन् । यसका साथै उनीहरु मानव बे’चबिखनमा समेत सं’लग्न रहेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
यौ’नधन्दामा संलग्नलाई प्रहरीले प’क्राउ गर्न सफल भए पनि मानव बेचविखनमा संलग्नलाई प’क्राउ पूर्जी जारी गरेर खोजी भइरहेको प्रहरी जनाएको छ ।
अ’त्याधुनिक प्रविधिबाट बनाइएको ढोकाबाट भित्र छिर्नु र बाहिरिनुअघि त्यहाँ सुरक्षित पासवर्ड जडान गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार ढोकाबाट भित्र ल्याउने र बाहिर लैजान काम ग्राहक बनेर गएको महिलाले नै सम्हालेकी रहेछिन् ।
अकाउन्टेन्टको फायलअनुसार ३ वटा छुट्टाछुट्टै बुकिङ गरिएको फायल भेटिएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ । प्रहरीका अनुसार एकजना ग्राहक यौ’न सम्पर्कबापत् ३ हजारदेखि १५ हजारसम्म लिने र कमिसन बापत् ल्याउनेलाई २५ प्रतिशत दिने गरिएको रहेछ ।
अपार्टमेन्टको ढोका नै पुग्न ६ महिना लागेको प्रहरीले भदौ १ गते ७ जनालाई प’क्राउ गरिसकेको छ । हाल हिरासतमा रहेका उनीहरुमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प’क्राउ पर्नेहरुमा हेटौँडाकी ४२ वर्षीया गीता खड्गी, झापाका ५० वर्षीय राजेश अग्रवाल, रुकुमकी २३ वर्षीया ललिता बिक, बर्दियाकी २९ वर्षीय सुनिल विष्ट, काठमाडौं बालाजुकी क्रिष्टिना केसी, सिन्धुपाल्चोककी २५ वर्षीया निर्मला न्यौपाने र काभ्रे पनौतीका ३३ वर्षीय प्रतीक कर्माचार्य रहेका छन् । तस्विर : प्रतिनिधात्मक/गुगल